सन्तोष पौड्याल - मैले साथीको साईनो लाउँदा रोटी-बेटीको गीत गाउँदा के पो गरेनौं तिमी? मेरो खाना खाने थाली खोस्यौ सुस्ताको खेतबाली खोस्यौ मेरो घाँटी सुकाएर महाकाली खोस्यौ।
खोइ त पुनर्निर्माण?
जयराम पुडासैनी - नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति र भारतले नेपालसँगको आफ्नो विश्वास गुमायो। अहिले यथार्थ फेरिएको छ। नाकाबन्दीपछि इन्धन र आवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज बन्दै गएको छ। अब पुनर्निर्माण र स्थायी तथा अस्थायी पुनस्र्थापनाको मार्ग सहज बन्दै गएको छ। अर्को शब्दमा अब कुनै पनि ढिलाइ र हेलचक्र्याइँलाई उचित मान्न सकिन्न।
योरुनाको हत्या र नारी अधिकार
सविता सापकोटा - सधैँ नारीलाई आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्ने पुरुषले नै नारीमाथि अत्याचार गर्ने गर्छन्। एउटा अत्याचारी पुरुषले उम्किने मौका पायो भने अन्य पुरुषहरूका लागि उ हौसलाको पात्र हुन सक्छ। समाजमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध दोहोरिन सक्छ।
मानक बन्न नदिएको हो कोइरालालाई
दीपक बोहोरा - संविधानमा आफ्नो र आफ्नो पार्टीको अडान भन्दा पनि सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने कोइरालाको चाहना थियो। संविधान बनाउन पहिलो संविधानसभाले आठ वर्ष लगाएर कसैले बिर्सेका छैन्न। संविधाननै नाममा करिव देश एक दशक बन्धक बनेका बेला कोइरालाले सवैलाइ समेट्ने आँट गरे। कोइरालाको आँटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साथ नदिएका भए संविधान जारी गर्न सम्भव थिएन। दाहालले कोइरालाको जन्म गाउँ विराटनगरमा पुगेर भने-सुशील कोइरालाको नेतृत्वदायी भूमिकाले संविधान सम्भव भएको हो।
उद्योग नखुल्ने देशमा नयाँ नयाँ पार्टी
बर्षा पौडेल - उद्योग धन्दा बन्द हुँदैछन, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, दीर्घकालीन योजनाहरू भताभुङ्ग छन्, क्षमता भए पनि अवसरको कमीले जनशक्ति पलायन हुदैछन, तर नयाँ नयाँ पार्टी र नया(नयाँ नेता अनि उनीहरूका नयाँनयाँ मुद्धा जन्मिन रोकिएको छैन। मुद्धै मुद्धामा देश अल्झेको छ।
देश लुट्ने अमर हुँदैन
राकेश कुमार रसिक - जनता ठग्नेको स्तर हुँदैन देश लुटने अमर हुँदैन सबै मानव शिखर हुँदैन मर्ने कसैलाइ रहर हुँदैन।
म पुरुष हुँ, बलात्कारी होइन
राम ढुंगाना - बलात्कार मात्र एउटा पुरुषले गरेको हो। दोषी पनि त्यहि कुपुरुष मात्रै हुन्छ। समाजमा बस्ने सबै पुरुषहरू यसमा दोषी छैनन् । चेतना होस् कतिपय अवस्थामा एउटा नारीलाई बलात्कार हुनबाट बचाउन पनि यही समाजका पुरुष अगाडि आउँछन्।
आफ्ना मान्छे नभएकाले इन्धन नपाउने हो र!
केदारनाथ नेपाल - नाकाबन्दी भएपछि सरकारले वीरगञ्ज बाहेकका नाकाबाट भित्रिएको इन्धनलाई सञ्चित गरेर बेलाबेलामा सर्वसाधारणलाई वितरण गर्दै आएको छ यसको लागि भने सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। हामी सर्वसाधारणले सरकारले वितरण गरेको इन्धन लिन दुई दिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ तर सरकारी कर्मचारी र पुलिस प्रशासनका आफन्तहरूलाई भने सर्वसाधारणलाई जत्तिको झण्झट छैन।
होस्टेमा हैसे गरौं
न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ - सरकारी उच्च सेवामा राष्ट्र सेवा गर्छु भन्ने कर्मचारीले भ्रष्ट्राचार जस्तो जघन्य अपराध गर्दछ भने त्यस्ता अपराधीहरुलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न राज्य कुनै हालतमा पछि पर्नुहुँदैन्। अदालतले पनि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दालाई गहन अध्ययन गरी चाडो भन्दा चाडो फैसला गर्नुपर्दछ। हालै ललितपुर प्रहरी प्रमुख दयानिधि ज्ञवालीसहित चार जनालाई तिनलाख रुयौँया घुस लिंदै गर्दा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखी कारवाही गरिएको समाचार आएको छ। समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी प्रमुखबाटै घुसखोरी र भ्रष्ट्राचार हुन्छ भने कस्लाई विश्वास गर्ने नागरिकहरुले? अख्तियारको तदारुकता जति बढेपनि घुसखोरी नियन्त्रण नहुनु दुःखदायी विषय हो।
विमानस्थलका कर्मचारीकाे हप्किदप्की
सरल गुरुङ - फाेन उठाउने महिला कर्मचारीले मेराे परिचय मागिन मैले नाम बताए । उताबाट एक्कासी ठुलाे ठुलाे आवाजमा गाली बर्सियाे । साधारण मान्छेलाई एयरपाेर्टकाे माैसम बारे भन्न मिल्दैन उनकाे जवाफ थियाे । उनले झन चर्काे स्वरमा गाली गर्दै फाेन राखिन ।मैले दाेहाेर्याएर फाेन गरे, यस पटक पुरुष कर्मचारीले फाेन उठाए । उनले थपे सर्वसाधारण भएर विमानस्थलमा फाेन गरेर माैसम बारे साेध्ने ? याे अप्रेसन सेन्टर हाे, माैसम बारे भन्न मिल्दैन सर्वसाधारणलाई । उनले मलाई चेतावनी दिए - तिम्राे नम्बर कारवाही सुचिमा राख्छु । म छक्कपरे, विमानस्थलकाे वेवसाईटमा राखिएकाे सार्वजनिक नम्बरमा फाेन गरेर माैसम बारे साेध्दा अपमान र कारवाही ! मन मानने, मैले तुरुन्तै विमानस्थलका प्रमुख देव अानन्दलाई फाेन लगाए, हलुका जवाफ अायाे, म बुझ्छु ।
किन शुरु भएन पुननिर्माणको काम?
तिर्थ गुरुङ - यस्तो आपतविपतको राहत र पुननिर्माणको काम थालनी गर्नको लागि पनि के को साइत? अनि के को उदघाटन कार्यक्रम? अझ उदघाटन पनि दुई दुई स्थानबाट।
चर्चाका लागि खादाले यौनांग ढाकेर फोटोसुट गर्नैपर्छ?
पार्वती घिमिरे पन्त - गल्ती जो कोहीबाट जुनसुकै स्थानमा जसरी पनि हुन जान्छ। जानेर गरिएको गल्ति क्षमायोग्य हुँदैन। अन्जानमा गरिएको गल्ति माफीको लायक हुन्छ। केही समय अगाडि नेपाली चलचित्र जगतकी नायिका सुवेच्छा थापाले चर्चाका लागि बौद्ध धर्माबलम्बीहरुको पवित्र मानिने खादाले यौनांग ढाकेर फोटोसुट गरिन्। जसका कारण नेपाल चलचित्र कलाकार सघंले उनलाई ६ महिनासम्म चलचित्र सम्बन्धि कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेको छ। जुन गर्नैपर्छ। यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य कार्यको थालनी हो। यस्ता कार्यबाट गल्ति पुन:दोहोरिने मौका कम हुदै जान्छ। आज चलचित्र जगतमा मात्र होइन अन्य विविध क्षेत्रमा कारबाहीको उतिकै आवश्यक छ।
नढाँटी भन्नुस् ओलीज्यू सबैका घरमा दाल चामल कहिले हुन्छ?
तेज किरण ओली - खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भइरहेको बेला तपाईंले फ्याट्ट भनिदिनु भयो–अब सिलिन्डरको फेज समाप्त भयो। कहिले ग्यासको बुलेट आउला भनेर हेर्ने दिन गए। अब चुलाचुलामा ग्यासको पाइप फिट गरिदिन्छु, भित्तामा मिटर टाँसिन्छ जति बाल्नुहुन्छ त्यसको पैसा तिर्नुहोस्। तपाईंका यी भाषण कसैले पत्याए कसैले पत्याएन। कतिले हाँसोमा उडाए। नढाटी भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यु, म १९ वर्षको ठिटो हुँ मैले अब कति वर्ष कुनुपर्छ सबैका घरमा दाल, चामल अनि ग्यास र पानी हुन। ग्यासको पाइप मेरा लागि टाढाको कुरा हो।
डान्सबार र डिस्को बन्द गरेको खोइ?
िभक्टर पौडेल - राजश्वको सवाल हो भने, फुटसललाई पनि करको दायरा भित्र ल्याउनु पर्छ, कसैलाई लुट्न छुट कुनै कानुनमा छैन। नीति नियमको अभाव हो भने कुन नियममा उभिएर फुटसल खोलियोरु यो पनि जिम्मेवार निकायबाट छानबिन हुनपर्छ, दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री ज्यू! उखान-टुक्काको भरमा देश चल्छ र?
पार्वती घिमिरे - योजना बनाउनु एकदमै राम्रो हो।कार्यान्यन र व्यवस्थापन गरेर देखाउनु त झनै राम्रो। चुलोचुलोमा ग्यास पाइप फिट गरिदिने , हावाबाट बिजुली निकालेर एक वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने ,डीजलवाला भुरुरु धुँवा छोड्ने बस होइन इलेक्ट्रोनिक बस चलाउने जस्ता ...
गफ होइन,काम गर्नुस् प्रधानमन्त्री ज्यू !
रामप्रसाद पाण्डे - प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, हो सम्भव छ, तपार्इले भनेका सबै ठाउँबाट बिजुली निकाल्न सम्भव छ, अझै अरु पनि ठाउँ छन् बिजुली निकाल्ने। सम्भव छ, काठमाडौंको फोहोरबाट बायोग्यास निकालेर घर-घरमा पाइप जोड्न। तर के यो काठमाडौंको लागि पर्याप्त छ? यदि छ भने एक वर्षमा सक्ने तपाइको आधार र योजना के छ? हो थाहा छ, तपाई राजनीति गर्नुहुन्छ, त्यो पनि परम्परागत। तपार्इलाई ताली चाहिँएको छ र भाषण गर्नुहुन्छ - गफको शैलीमा, तर कहिल्लै मनन गर्नुहुन्छ, के बोल्दै छु र के बोलें भनेर? तपाइलाई भन्नै पर्ने भए विज्ञसँग बुझेर भन्नुस, तर राजनीति गफ हो भनेर नकारात्मक सन्देश प्रबाह नगराउनुस्।
प्रधानमन्त्रीले चाहे ग्याँस सिलिण्डर प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ
शरणकुमार - प्रधानमन्त्रीलाई उपहासको पात्र वनाइरहने हामी जस्तै नागरिक र उपहास बनेको हेरिरहने राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरू सवै होस्टेमा हैसैं गर्ने हो भने देशले उर्जा संकटवाट सजिलै निकास पाउनेछ। सकारात्मक सोचले अगाडि वढ्न जरुरी छ। परिर्वतन सम्भव छ।
शंकाको भुमरीमा मेरो स्वाभिमान
ललिता तामाङ - तर मेरो अनुहारमा भने हासो बिलाएको छ। मेरो मन कहिल्यै खुशी छैन। बोल्ने र हास्ने जाँगर मरेको छ। धेरैजसो अँध्यारोमा बस्ने बानी लागिसकेको छ। उज्यालो भइहाले पनि हाफलाइट भनाउँदोले साथ छोड्दैन। निजी सवारीलाई पेट्रोल भनेर सुचना कहिले आउला भनि पत्रिका र समाचार हेर्न बिर्सन्न। ग्यास डिपोले तपाइको पालो आयो ग्यास लिनआउनुस् भनेर फोन गर्ला कि भनि हाफलाइटमै भएपनि मोबाइल चार्ज गर्न छुटाउँदिन।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतलाई ९ प्रश्न
राम ढुंगाना - अर्थमन्त्रीको मुख्य काम देशलाई विकाश र आर्थिक रुपमा अघि बढाउनु हो। देश विकाशको मुख्य साँचो अर्थमन्त्रीकै हातमा हुन्छ। २०४६ सालपछि पटक- पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रामशरण महतलाई बेलायती पत्रिका द बैंकरले 'एसिया प्रशान्त क्षेत्...
बाबुरामले दिएको कम्मल मलाई होइन अरूलाई बाँड्नका लागि हो
टिकाराम खनाल - म टिकाराम खनाल, गोरखा जिल्ला बक्राङ गा.वि.स. ५ निवासी, स्थानीय लक्ष्मी प्रा.वि.को प्र.अ हुँ। गाउँमा गा.वि.स. सचिव नभएकाले प्रअको हैसियतमा भूकम्पबाट पीडित जनताको राहतको लागि भनी ल्याईएको सामाग्री (कम्बल) पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हातबाट मैले बुझिलिएको हुँ। भूकम्प बाट बढी प्रभावित तथा गरीबलाई छुट्याएर वितरण गर्नू गराउनू हुन मैले नौ वटै वडा संयोजकहरुलाई तत्कालै भनेको थिए। यद्यपी मैले बाबुराम भट्टराईसँग लिएको उक्त सामाग्रीको तस्विरलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा झुठा र कपोकल्पीत टिकाटिप्पणी प्रति खेद ब्यक्त गर्दछु।
कर्मचारीको घडीमा १० मिनेट अघि तीन बजेपछि.....
सरोज केसी - समयको महत्व सापेक्षिक हुन्छ तर मात्रै १० मिनेटले यस्तो होला भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ। पौष १४ गतेको कुरा हो। दिउँसोको २ बजेर ४६ मिनेट जाँदा म त्रिपुरेश्वर कर कार्यालयमा रहेको एभरेष्ट बैंकको काउन्टरमा पुगेको थिएँ। पैसा जम्मा गर्नु थियो। ...
आशिष दुलाल - तप्प चुहिन्छ शित त्रिपालबाट काँडा उम्रको जिउमाथि, भुराहरू ज्वरोले थलिएका छन्, चिसोले पाल बाहिरको आगो ननिभाउँदै भोकले बाल्दैछ आगो। एकसरो लुगाले लुगलुग छिन भोटेनी दिदी सायद जुट्दैछ न्यानोपन सिंहदरबारबाट, सायद फुटेकै यसैका लागि मन्त्रालय। यस...
ओलीज्यू! निद्रा पुगेन?
अभिषेक राज सिंह - ओलीज्यू, बालुवाटार बाहिरको स्थिति भयाभह छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको चरम अभाव र कालोबजारीले सम्पूर्ण नेपाली आक्रान्त हुँदाहुँदा थाकिसकेका छन्। तर तिनले राष्ट्रियता सम्झिएर नबोलेका हुन्। अत्यावश्यक वस्तु अभाव भएको पनि धेरै भइसक्यो। अझ कालोबजारी!
रविना महर्जन - महिलाहरुको कदर गर्न सिकौँ,महिला हिंसा भैरहेको देखेमा तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरौँ। परिवर्तनको बिगुल फुक्दैमा परिवर्तन सम्भव छैन।अवसर तथा शिक्षाको पहुँच सबै क्षेत्रका महिलाहरुमा पुर्याउन सम्बन्धित सरोकारवाला,संघसंस्थाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ।
म अनागरिक हुनुमा मेरो के दोष?
इज्मा पोखरेल - बालिका हुँदा नै , बाबुआमाले पुण्य कमाउन, दुलही बनेकी मेरी आमा! खाउ खाउ र लाउ लाउको उमेरमै सिन्दुर अनि गलाको पोते चुडाएर, श्रीमानको प्रेम बिना नै बाचिन् ! चिनो , गर्वमा हुर्किदै गरेकी म । आफ्नो पेट पाल्नको लागि , नदी किनारमा गिट्टी क...
सामाजिक सञ्जाल बाहिर नयाँ शक्ति
नारायण पोख्रेल - नेपालको इतिहासले हरेक १० बर्ष जतिको फरकमा नयाँ शक्तिलाई उचाइ दिएको छ। २०३६ साल, २०४६ साल, २०५६ देखि २०६२ सालको अवधि आदीले नयाँ शक्तिलाई जन्म दिइरहको थियो। २०४६ साल र २०६३ सालपछि सत्तामा आएका शक्तिको गतिविधि र परिवर्तन र विकासको जनचाहनाले फेरि अर्को...
काला मनका धनी मोदी!
कृष्णराज खनाल - ओवामालाई सनातन धर्म देखाएर के भो ? सिन्जो आवेलाई गीता बाँडेर के भो ? एउटा असल छिमेकीलाई मौका पाउनासाथ पीडा दिएर ढाडमा छुरा हान्छौ भने तिमी ढोँग सिवाय केही होइनौ तिमी फगत मोदी हौ तिमी काला मनका धनी रहेछौ ।
'ब्ल्याक' रोक्नलाई त 'व्हाइट' उपलब्ध गराउनु पर्यो नि सरकार
महेश आचार्य - 'ब्ल्याक' रोक्नलाई त सरकारले 'ह्वाइट' उपलब्द गराउनु पर्यो नि । ह्वाइट पाउदा पाउदै ब्ल्याकखरिद बिक्रि भयो भने पो जनता आपराधि, ह्वाइट नै नपाउने भएपछी जनताले ब्ल्याक किन्छन तउनीहरुको के को दोष ? मानौ कसैलाई ईमरजेन्सी हस्पिटलमा पुर्याउनु पर्‍यो अब के गर्ने ब्ल्याकभाडामा ट्याक्सी चढ्ने कि मान्छेलाई मर्न दिने?
लाखौं 'मुस्कान'को मुस्कान कस्ले फर्काउने?
विशाल सिलवाल - ३ महिनादेखि आन्दोलनरत आफ्नो घर समाज देखेकी र छतमा बसिरहेको बेलामा प्रहरीको गोली लागि आफू घाइते मात्र नभएर आफ्नो बुवा पनि गुमाएकी ती अबोध नानीको कलिलो मानसपटलमा के-कस्तो असर पर्‍यो होला। उनको दिमागमा आज जुन छाप बसेको छ त्यो मेट्न सजिलो छैन। ठूली भएर उनले राज्यलाई छतमा बसिरहेका आफ्ना बुवालाई मार्नुको कारण सोधिन भने राज्यले के जवाफ देला? ५ बर्षको हुँदा आफूलाई गोली किन हानेको भनेर सोधिन भने के जवाफ पाउँछिन्?
फ्रान्स हमलामा मारिएकाप्रति समर्पित
युवराज काफ्ले, इटहरी - मन्दिरले नि प्रेम बोल्छन् मस्जिद पनि प्रेम नै बोल्छन् चैत्यले नि प्रेम बोल्छन् गुम्वा पनि प्रेम नै बोल्छन् तामा तुलसी पित्तल सधै देवल पाटी सत्तल सबै मात्र प्रेम, प्रेम बोल्छन् । वाईवलले नि प्रेम बोल्छन् पुर...